जाडो, बा र म…… « Nepal Page
भाद्र २२, २०७८ मंगलबार
जाडो, बा र म……
बा झिसमिसेमै उठेर टोललाई सेलरोटीझैँ एक फन्को मारेर घर आइपुग्नुहुन्छ । म दुईदुईवटा सिरक खापेर मस्त सुतिरहेको हुन्छु । बा दोस्रो चिया पिउँदै गर्दा म आँखा मिच्दै ब्रसमा टुथपेष्ट हालेर ‘आच्छु’ भन्दै बाथरुम पस्छु । मलाई धाराको पानी चिसो लाग्छ । बालाई हाँसो लाग्छ । मसँग जाडोको बहाना छ । बासँग जीवनमा अझै धेरै थोक गर्नुछ भन्ने चाहना छ । म भरखरको, तन्नेरी, आफ्नै आँखामा कमजोर लाग्छु । बा साठी नाघिसकेका बृद्ध हरेक काममा जोर लगाउनुहुन्छ ।त्यसो त बा अर्कै जमानाको, म अर्कै जमानाको । बा जीवनभर काम गरेर रिटार्यड हुनुभएको नागरिक । म जवानीमै केही नगरी टार्यड भएको नालायक । बा रिटार्यड जीवनमा झन् बेफुर्सदी हुनुहुन्छ । म भरी जवानीमा फुर्सदको जीवन बाँचिरहेछु । बा भत्किएका चीजहरु बनाउनुहुन्छ ।
भान्साको ढोकाको चुकुलको उक्किएको पेज कस्नुहन्छ । बिग्रिएको धाराको टुटी फेर्नुहुन्छ । भित्ते घडीको सुइ चल्नै छाड्यो, तुरुन्त ब्याट्री किनेर ल्याउन जानुहुन्छ । टोल सुधार समितिको मिटिङ्गमा आफ्ना राय प्रकट गर्न जाने पनि बा नै हो । फूलहरुमा पानी हाल्नेपनि बा नै हो । कतै केही चुहिए टाल्नेपनि बा नै हो । बा बिजुलीको बिल तिर्न प्राधिकरण पनि जानुहुन्छ । घरको तिरो तिर्न हिन्नेपनि वहाँ नै हो । बा भत्किएका चीज देख्नै सक्नुहुन्न । त्यसैले छोराछोरीका रहरहरुपनि भत्किन दिनुहुन्न । छोराछोरीका सपनाको पेजकिल्ला उक्किन दिनुहुन्न । म सधैँ बाका अघिल्तिर ङिच्च परिरहन्छु । म बाजस्तो यताउता कहीँ जान्न ।
म आफैँमा बढी सीमित भइरहन्छु । बा हरेक दिन बिहानै उठेर चिसो पानीले नुहाउनुहुन्छ । म उही जाडोकै बहाना गर्दै हप्तौँ बितिसक्दा पनि फोहोरीको फोहोरी नै बसिरहेको हुन्छु । बा हरेक दिन दाह्री काट्नुहुन्छ । मलाई मानौँ ब्लेडसित एलर्जी छ । त्यसैले म मैलो कट्कटाउँदो देखिन्छु । बा भरखरको भरभराउँदो देखिनुहुन्छ । अँहँ, बालाई पटक्कै जाडो हुन्न । बा खाना खाएपछि एकघण्टा घाम तापेर बस्नुहुन्छ । म दिउँसो पनि कोठाभित्र सिरक खापेर बस्छु । बा भन्नुहुन्छ, ‘जाडो त त्यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ, जो हरदम सिरकमै गुट्मुटिएर बसिरहन्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ जाडो, जो जाडो भो भन्दै धेरै भुट्भुटिएर बसिरहन्छ । जाडो तिनैलाई बढी हुन्छ जो जाडोसँग बढी भाग्छ । जो जाडोसँग डराउँछ ।
जो न जाडोको छेउमा जाने आँट गर्न सक्छ, न जाडोलाई आफ्नो छेउमा आउन दिने हिम्मत गर्न सक्छ ।’ बा अक्सर भनिरहनुहुन्छ, ‘छोरा, जाडो त मान्छेको शरीरमा भन्दापनि बढी मनमा हुन्छ ।’ भन्नलाई मात्र म बाभन्दा एक पुस्ता अगाडी, साँचो अर्थमा म बाभन्दा धेरै युग पछाडी ! बाको कपालमात्र सेतो हौसला साउनजस्तै हरियो छ ।
बाको आँखामात्र कमजोर हो, इच्छाशक्ति कुनै पर्वतभन्दा होचो छैन । बाको हड्डीमात्र बूढो, जाँगर तन्नेरीको भन्दा कैयौँ गुना बढी छ ।यहि छ बा र मबीचको फरक । म अक्सर सिरकमा, बा अक्सर काममा । म सधैँको निकम्मा । बा केही भन्नुहुन्न धन्न !मान्छेहरु भन्छन् मेरा आँखा बाको जस्तै छ रे । मेरो हिँडाइ बाको जस्तै हिँडाइ छ रे । मेरो हात खुट्टा बाको हात खुट्टा जस्तै छ रे । तर मेरो जाँगर, बाको एक चौथाइजति पनि छैन । कठै, बाको जतिको हौसला र हिम्मत ममा कहाँ होला ? बाजस्तो म कैले हुने होला ?
काठमाडौं, ६ असोज । हरिबोधनी एकादशी गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियो सार्वजनिकको
भरतमणि बने कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को विजेता
काठमाडौं, २ असोज । रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को दोश्रो संस्करणको उपाधि भरत मणि पौडेलले जितेका
११ फिट अग्लो कठपुतली ‘लिटिल अमल’
काठमाडौं, ३१ भदौ । ११ फिट अग्लो कठपुतली ‘लिटिल अमल’ सिरियाली शरणार्थीहरुको बारे मा जागरूकता
दीपिका-रणवीरको रु. २२ करोड बंगला
बलिउडको सबैभन्दा लोकप्रिय जोडी रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणले भर्खरै दोस्रो घर को लागी अलीबाग
बलिउडको प्रख्यात निर्माता निर्देशक बडाजात्या छायाङ्कनका लागि मनाङमा
मनाङ, ३० भदौ । कोभिड– १९ र गत असार १ मा आएको बाढीपहिराका कारण आवतजावत
अध्यक्ष प्रचण्ड र चलचित्रकर्मीहरुबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, ३० भदौ । चलचित्र क्षेत्रको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदै चलचित्रकर्मीहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
प्रचण्डकी नातिनी स्मिताले ल्याइन् हिन्दी गीत
काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की नातिनी स्मिता
जान यमनः वकिल देखि टर्कीका चर्चित अभिनेता सम्म
नेपालमा विदेशी मनोरञ्‍जन सामग्री बढी चल्ने भए सँगै विदेशी सिरियलले बजार तताएको छ । त्यसमा